Su'aal: Pregnancy cluster?
Author Topic: Su'aal: Pregnancy cluster? (Read 24186 times)
« on: September 14, 2011, 07:45:44 PM »
SALAAMU CALAYKUM DHAMAAN.
BACDA SALAAN WALAALAYAAL WAXAAN AAD IYO AAD AAN U AMAANAYAA CINWAANKAN SHARAFTA IYO FAAÍIDADA ISKU DARSADAY EE NAGA HAQABTIRA KOLBA SU'AALAHA AAN QABNO, MAHAD.
Dr. Hadaan su'aashayda u galo waxaan doonayaa inaad ii soo sharaxdo ''Pregnancy cluster'' waxaa uu yahay iyo sida uu u dhasho iyo waxaa uu ka kooban yahay?
1- Dr. xaaladani waxay soo martay xaaskayga oo dhawr bilood ka hor ayay qabsatay xaaladani laakiin waxaan u baahnaa inaad ii sharaxdo maadaama oo aan ahaaa qof ka jaahil ah laakiin markii danbe macluumaad ka helay inkastoon wali aanan fahmin si buuxda,
2- Dr waxaad iga soo shaki saartaa in uu wax khatar ah uu ku salayn karo NINka ama inuu ka yimid arinkani dhinaca NINka oo uu sabab u noqonkaro imaanshaha "Pregnancy cluster" Sida Asbaabaha keena.?
3- Dr. waxaan rabaa in aad sharaxaada aad iigu soo darto ama aad ii soo raaciso nasiixooyin ama waano ku saabsan ''Pregnancy cluster'' .....
Re: Su'aal: Pregnancy cluster?
« Reply #1 on: September 20, 2011, 04:26:22 PM »
Molar pregnancy waxay soomaalida u taqaanaa "Uurjiif Shuuq".
Uurjiif shuuqu waa uurka ka dhasha ukun bu' lawda ah oo bacrisanta.
uurjiif shuuqa waxaa loo kala qaadaa mid dhameestiran "complete" iyo mid qeyb ah "partial".
Kan dhameestiran wuxuu ka dhashaa markii la bacrimiyo ukun bu' la'aan ah ana aan firfircooneyn.
Kan qeybta ahne waxay ka timaadaan markii laba xaw (sperm) ay bacrimiyaan hal ugxan (Ovum).
Kan dhameestiran wax uurjiif ah kuma jiraan iyo mandheerba kan kalane way dhici kartaa.
Calaamadaha lagu garto uurjiif shuuqa waxaa ka mid ah:
lalabo iyo matag siyaado ah
Dhiigbax xagga hoose ah
Hormoonka hCG oo sare u kaca
Minka oo aad u weynaada
Dhiig kar 6-da bilood ee ugu horreysa
Nuunuuxsi la'aan uurjiif
Qanjirka toroodka oo firfircoon (Hyperthyroidism)
Waxaa lagu gartaa in haweentu ay uurjiif shuuq wado:
badanaa uurka wuu iska dhamaadaa markii haweentu ay soo saarto wax u eg sida miraha cinabka oo tira badan.
waxaa lagu arki karaa qalabka ultrasoundka ama cabbirka hormoonka hCG.
Haddii uurka uu soo dhamaan waayo waa in la soo xaaqaa oo laga soo saaraa waxii minka ku haray, badanaa haweenta wada uurjiifka ma fiicna in la fooliyo cabsi dhiigbax awgeed.
Waa in si joogto ah loo cabbiraa hormoonka hCG dhowr usbuuc illaa ay si caadi ah ku soo laabtaan illaa hal sano hooyadu looma ogola inay uur qaado maxaa yeelay wuxuu uurjiif shuuqa isku badali karaa kaankaro.
Haddii aad su'aalo caafimaad ah qabtid iigu soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
« Reply #2 on: September 23, 2011, 02:22:30 AM »
Dr. waad ku mahadsan tahay jawaabta. Koowaad sida wanaagsan ee aad igu soo sharaxday.!
Laakiin Dr. Wax baan ka fahmay waxna kamaan fahmin.
Waxaa ka mida :-
1- Hadii uu yahay ukun aan bacaramisneen micnaheedu waa maxay? ma ta ninkaa mise waa ta Naagta, laakiin halkay ka timid asalkeedu yaase keeni kara?
2- waa maxay kaankaro ?
3- ''Molar pregnancy'' mise keenaa CANCEL-ka ama Saradaanka ? "Allaan kamagan galnayee''
4- Miyuu soo noq noqdaa ''Molar pregnancy'' ama Uurjiiftu ? maxaase muhiim ah oo lagaga hortagaa?.
Sharaxaad Dheeraad ah.
Dr. Xaaskaygu waxaa lagu sameeyay xaaqintaas aad soo sheegtay iyada oo ah 6-8 Usbuuc, ayay Molar pregnancy jiray, markii ay xaaqnida samaysay ilaa maanta waxaa laga joogaa ilaa 4-5 bilood, waxaana loo soo qoray dawo ka hortaga uur inuu imaado si wanaagsan ayay u qaadataa, dhawr shaybaadhna waa la soo mariyay ama dhawr moocid ayay dhakhtarka ku noq noqotay waana lala socdaa dhakhtarka, laakiin markii ugu danbaysay ee aanu tagno dhakhtarka oo ah kii hore mid ka duwan oo si aad ah u baadhay haday noqoto dhiig iyo x-ray ama sawiro, 2cesho ka hor wuxuu ku soo sheegay inay jiraan waxoogaa yar oo aad moodo dhiig ku jira Makaanka ama Riximka ''RED CELLS" 1/2 iyo Dhiig yaraaan. Taas oo aan runtii fahmi waayay wuxuu yahay Dhiigaas yar ee lagu soo sheegay, waxaanu Dr. markii aan weydiiyay igu yidhi waa wax iska caadiya ee ha badsato Dareeraha ama biyo badan wuu iska hagaagi doonaaye, Runtii maan fahmin waxoogaa macluumaadaana Dr. waan uga baahanahay inaad iga siisid warbixintan, ''It's Important For Me'' Thanks.
Dr. Hadii aanad fahmin warbixin taydan Si wanaagsan isoo weydii ama waxaanad ka fahmin isoo weydii si aan kuugu waadixiyo.
Raali Suáashayda oo aan dareemsanahay inay dheertahay laakiin baahi aan u baahanahay ayaan usoo sharxay oo aan usoo diray.
« Reply #3 on: September 27, 2011, 08:31:47 PM »
Ukunta laga hadlaayo waa midda haweenta, waxaana soo daayo xubin la yiraahdo ugxan side oo haweenka ku jirto.
Kaankaro macnaheedu waa Kansar ( ??)
Molar pregnancy wuxuu leeyahay khatar yar oo ah inuu isku badalo kansar, sidaa darteed haweenta markii lagu arko cudurkaan oo ilmaha laga soo xaaqo, waxaa lagula taliyaa in aysan uur qaadin illaa laga hubiyo in khatartaas ay ka gudubtay.
Khatartaas waxaa lagu kontoroolaa baaritaan joogto ah oo takhtarkaaga kugula talin doono kaasoo ah in lagu ogaado heerka uu maraayo hormoonka hCG ee uurka, kaasoo sida caadiga markii uurjiifka lagaa soo xaaqo la rabay inuu baaba'o.
Cudurka uurjiifshuuqa "Molar Pregnancy" wuu soo laalaabtaa laakiin maahan mid badan, wuxuuna u dhigmaa 2% kaliya inkastoo haweenka qaarkood uu ku badan yahay sida haweenka ka weyn 40 sano.
Waxaad uga hortagi kartaa in xaaladaan kugu soo laabato adigoo uuryeelan inta xaaladda khatarta ku jirtid, kana war sugtid talada takhtarkaaga.
Midda takhtarka kuu sheegay oo ah in dhiig yar lagu arkay raximka gudihiisa maahan wax dhib badan leh sida takhtarka ka dhawaajiyaya maxaayeelay haweenta markii la xaaqo oo weliba uurjiifshuuq lagu arkay in raximka caadigiisa ku laabto waqti ayuu qaataa, marka in wax aan badnayn lagu arko wax dhib ah malahan.
« Reply #4 on: September 28, 2011, 08:24:52 PM »
AAD IYO AAD AYAAD U MAHADSAN TIHIDIIN DHAMAANTIIN, SI WANAAGSAN EE AAD IIGU WAADIXISEEN.
I have only one more question..... The last question about this topic, Inshaállah
1- Dr. Hadii ay jirto dawooyin dabiiciya ama dhir dabiici ah oo lagu saacido qofkan xaaladan oo kale soo maray sida "Molar Pregnancy" oo kale cuntooyin, ii soo faaíidee,
2- Dr. malaga yaabaa sanad wax ka yar inay uur qaadi karto sida 9,10 Month oo kale?
3- Dr. Ma sii wadan kartaa dawada ay cunto oo ah ka hortaga dhalmada in ka badan 6-Month laakiin wax dhiba ma leeyahay dawadan ka hortaga dhalmada?
4- Dr. Khatartan uu keeni karo "Molar Pregnancy" Sida Kansarka oo kale mudo ama wakhti in tee leeg ayaa lagu garankaraa in laga gudbay khatartiisa iyo kale?
Dr. waxaa jirta markii ugu danbaysay ee aan Takhtarka aan u tagnay ee baadhista lagu sameeyay ayaa takhtarkii talooyinkii uu nasoo siiyay waxaa kamid ahayd markaanu weydiinay dhiigan yar ee ku jira RIXIMKA maxaa lagu daaweenkaraa ayuu yidhi Dareere ama sida waxaa biyaha oo kale u dareera badso. markaa Dr. Adna waxaad ii soo faa'daysaa talooyin ku saabsan Dawo Dabiici ah.
Dr. '' hormoonka hCG'' , wax dhibaato ah ma ka soo gaadhi kartaa "GALMADA DABIICIGA AH, ama wax dhiba ma ku keeni kartaa ISU TAGA LAMAANAHA in uu kaco ama hoos u dhaco ''Hormoonka hCG''
Ilaahay Nooma keeno Dhamaanteen Cudurada xun-xun Inta uu hayana alle ha ka bogsiiyo.
« Reply #5 on: October 06, 2011, 03:00:26 PM »
walaalayaal inka badan mudadii aad u qabateen oo ah 4-8 days way dhaaftay markaa walaal haday jirto wax cilad ah,,,, Raali galin dag dagayga..
« Reply #6 on: October 06, 2011, 03:41:36 PM »
Walaal, waxaa fiican in aad dulqaadatid, waayo Dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa in ay howlo fara badan hayaan, waxaa kale oo laga yaabaa in ay bukaano badan dul joogaan oo ay xaaladdaha ummaddooda Soomaaliyeed la tacaalayaan, xitaa waxaa dhici karta in ay webka howlo badan u diyaarinayaan. Marka dhiiya baraada please be patient and wait... Haddaba Walaalayaal fadlan Dhakhaatiirta yaan la degdegsiin ileyn degdeg Adduunyo laguma gaadhee. Marka fadlan walaalkeyga qiimaha lahow sidaas u faham. Ogow aniguba mararka qaarkood ilaa muddo Bil ah waxaan sugi jiray jawaabta su'aal aan dhakhtarka weydiistay, inkasta oo aan sugi waayi jiray laakiin waan ku khasbanaa in aan iska sugo oo aan sabro sababtoo anagaa dan leh oo si free ah dhibaatooyinka ina haysta wax na looga qaban nahayaa, sidaas daraadeed waa in aan si hufan u tixgalino dadka (sida Dhakhtarada, Culumada IWM kd.) kuwaas oo danahayaga sida samafalka ah ugu howlan, waliba waxaa ina la gudboon innagoo aan eegin wakhtiga ay tahay in danteena la fuliyo <<Haddii Alle Idmo>>. Jawaabta waan heli doonaa. Ugu dambeyntii jawaabteydaan walaal sidaas iila faham. Waadna Mahadsan tahay. Walaal waa inaan maanka ku haynaa in uu samirku yahay furaha jawaabta aan sugi kari wayno.
(Samirka wuu Qadhaadh yahay, wuu-se Midho Macaan yahay!).
« Reply #7 on: October 07, 2011, 03:21:38 PM »
Haddii aan ka jwaabo su'aalaha kuu soo heray:
Daawo dabiici ah oo loogu talagalay xanuunkaan uurjiif-shuuqa waxaa ka mid ah isticmaalidda malabka si minka u sifeysmo, haddii ay wax ku hareenna ugu soo baxaan bannaanka.
Sanad ka yar way ku qaadi kartaa uur, laakin kugula talin lahayn maadaama mar dhow xanuunkaas laga sheekay waxaana habboon in meel lagu hubsado oo soo naqashadiisu ay fogtahay.
Sii wadista daawada ay cunto waxaa kala tashataa takhtarka u qoray ,go'aan gaaristane waxay ku xirantahay baairtannada joogtada ah ee lagu sameeyo wixii isbadal ah oo laga dareemo sidii horay aan kuugu sheegeyba.
Daawooyinka uurka looga hortagane wax dhib ah malahan.
Ugu yaraan waa in laba sano lagu wadaa baaritaan, lagana ilaaliyaa uur, si looga hubsado in hormoonkii HCG uu dabiici noqday, cabsidii laga qabay in uu kansar isku badalane ay meesha ka baxdo.
Isu tagga saameyn kuma lahan kicista iyo dajinta hormoonka HCG labadaba
Caafimaad buuxa ayaan idiin rajaynayaa, waxaadna ogaataa su'aalaha kugu taagan dhamaantood jawaabtooda waxaa sheegi karo takhtarkaaga maadaama uu xaaladdaada la socdo baaritaan joogto ahne uu wado
Views: 17606 January 29, 2012, 12:22:48 PM
Views: 16050 March 29, 2011, 07:45:23 PM
Views: 4273 June 18, 2008, 02:30:09 PM
Views: 3581 December 13, 2008, 11:01:57 PM
Views: 19671 March 22, 2008, 10:12:19 PM